SPass - Work Passes - Shwe Myanmars
A blog by SaLone
Entry posted by SaLone · July 7
Admin အပိုင်းနဲ့ တင်ခွင့်ပြုပါရှင့်
Part (1) SPass ကရေးရမှာများပါတယ် အပိုင်းနဲ့ တင်ပေးပါမယ်
1. SPass အဓိပါယ်
အလည်အလက် level တခုပါ (mid-level ), professional ကတော့ EP ပါ။
2. ဘယ်သူတွေ လျှောက်လို့ရလဲ
• လစာ ၂၃၀၀ နှင့် အထက် : သတ်မှတ်လစာကတော့ ၂၃၀၀ ပါ သို့သော် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ and/or ကိုယ်ရထားတဲ့ အောင်လက်မှတ်နဲ့ လျှောက်တဲ့ position ပေါ်မူတည်ပြီး 2300 ထက်ပိုမှ approve ဖြစ်တာတွေ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ပိုများလာပါတယ်
• အောင်လက်မှတ်: သတ်မှတ်ချက်ကတော့ ဘွဲ့လက်မှတ် သို့မဟုတ် ဒီပလိုမာ လက်မှတ်ရှိရပါမယ်၊ technical level (e.g. engineer) လို level ဆိုရင် professional certificate or technical certificate ရှိရင် Spass try လို့ရပါတယ်. ဒါပေ့မယ် အဲဒီ certificate က သင်တန်းကာလ ၁နှစ်အောင် (part time study) ဆိုရင်တော့ မရပါဘူး
• Experience: အောင်လက်မှတ်တွေ မရှိလဲ မိမိလျှောက်မဲ့ Spass ရဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြု့တော်တော်များများရှိပြီး သတ်မှတ် လစာ ၂၃၀၀ နှင့် အထက် ဆိုရင်လဲ လျှောက်လို ရပါတယ်။ Company တော်တော်များများကတော့ အပေါ် ၂ချက်ရှိမှ လျှောက်ပေးကြပါတယ် ။ ကျွန်မ လုပ်ခဲ့တဲ့ company နှင့် အခုလုပ်နေတဲ့ company မှာတော့ WP တွေကို Spass ပြောင်းရင် ဒီ experience နဲ့တင်ပါတယ် ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ စက်ရုံ လုပ်သမားတွေမှာ certificate မရှိလို့ပါ၊
Spass က WP လိုမဟုတ်ပါ ၊ ဘယ် sector မဆိုလျှောက်လို့ရပါတယ် Spass အတွက် အရေးကြီးဆုံးက လျှောက်ပေးမဲ့ company မှာ quota ရှိဖို့ပါ၊ quota တွက်ပုံတွက်နည်းကတော့ sector ပေါ် မူတည်ပီးကွဲပါတယ်၊
3. Spass သက်တမ်း ဘယ်လောက်ရလဲ
Spass သက်တမ်းပုံမှန် ၂နှစ်ပါ၊ မိမိကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ Passport ကလဲ ၂နှစ်နဲ့အထက်ရှိရပါမယ်။
Passport ၂နှစ်အောက်ဆိုရင်တော့ Spass ကို Passport သက်တမ်းရှိသလောက် or ၁နှစ်ဘဲ ပေးပါတယ်
4. Spass လျှောက်ရင်ဘယ်လောက်ကြာလဲ
၂ပတ်ပါ ၊ စာရွက်စာတမ်းမပြည့်စုံရင် ပိုကြာတတ်ပါတယ်။ တခါတလေလဲ ၁လ ၊ ၁လခွဲ အထိကြာတတ်ပါတယ်
5. Spass အတွက်ဘာတွေလိုသလဲ
ရေးခဲ့ ဖူးတဲ့ WP အတိုင်းပါဘဲ. Spass လျှောက်မယ်ဆိုရင် Passport, အောင်လက်မှတ်လိုပါတယ်၊
ကိုယ်လျှောက်မယ့် company မှာလဲ Spass Quota ရှိရပါမယ်
6. Company ေတြ ဘာလို့ quota မရှိဘူး ပြောတာလဲ
တချိူ့ company တွေ့က quota တကယ် မရှိတာပါ။ ဒါပေ့မယ် company တော်တော်များများက ရှိ၇ဲ့နဲ့မသုံးတာပါ၊ quota ကို low level staff တွေ အတွက် မသုံးချင်ပါဘူး Spass quota ၁ခု ဟာ WP estimate 3-7 ခုအထိညီမျှပါတယ် ဒါကြောင့် company တွေ က quota မရှိဘူး အမြဲ ပြောတာပါ。Sector အလိုက် quota % တွေ ကွဲပါတယ်. Local staff များများရှိရင် quota များပါတယ်
7. SPass အတွက် company က ဘာတွေ တာဝန်ယူလုပ်ရပါသလဲ
• New hire ဆီက အဓိက စာရွက်စာတမ်း (passport, အောင်လက်မှတ်)
• Employer မှ IPA letter ကို employee ထံသို့email ပို့ပေးရပါမယ်
• Employee Singapore ကို ရောက်ရင်တော့ employer မှ ဆေးစစ်ပေးရပါမယ် ၊ MOM မှာ လက်ဗွေနဲ့ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးဖို့၁ရက်အချိန်ပေးရပါမယ်၊
မှတ်ချက်: ဆေးစစ်စရိတ် company က ပေးရမှာပါ
8. Employee (ဝန်ထမ်း) က ဘာတွေ ပြင်ဆင်ရမလဲ
• စာရွက်စာတန်းတွေကို သေချာစစ်ပါ Passport, IPA letter ကို print ထုပ်ထားပါ
• မိမိရဲ့ အောင်လက်မှတ်များကို ဘာသာပြန် နိုတြိ လုပ်ခဲ့ပါ စင်ကာပူမှာ အရမ်းစျေးကြီးပါတယ်
• Save ဖြစ်အောင် ဆေးကြို စစ်ထားသင့်ပါတယ်
သိချင်တာလေးတွေ cb or comment မှာမေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်
Credit: FattyCrab WS
Previous entry စက်ရုံ လုပ်သား